Waaheen Media Group » ISKU SHAANDHAYNTA: From Bashiir to Biixi.
Browse:Home Articles ISKU SHAANDHAYNTA: From Bashiir to Biixi.
ISKU SHAANDHAYNTA: From Bashiir to Biixi.
Xukuumaddii waa la isku shaandheeyey oo haddana la kala shaandheeyey. Dadka golaha iskugu imanayaa ma yihiin dad is qabanaya? Mise waa qaar Jabaaniis ku hadlaya sida Bashiir Xariir iyo qaar Ferenji ku hadlaya sida Maxamed Biixi? Tolow side bay isku af garan, yaa tarjumaan u noqon? .yaa dooda ku guulaysan doona? Ma inta badan eek u faraxsan ee meesha hunguriga u joogta mise inta yar ee waxqabp is leh ee jidkii maxamed xaashi iyo gaboose mari doonta sida maxamed Biixi?
Bashiir, abiib, cukuse iyo garaad way isla jaan qaadi, maxamedna maqaamkiisa hoose wuu iska joogi haduu maqaankii sare waayey.qolyaha cusub ee kale dhegaysiga way badin. Buureedna wuxu ku celcelin doonaa puntland baa dhaantay. Samaale iyo xirsina way isla jaanqaadi. Dumarkuna hoosta ayey iska huruufi. Maxamed biixi wuxu ka dhex baadhi axmed ismaaciil samatar oo uu moodayo inuu golaha ku jiro. Maacaleesh , muddo sacad cali shire ayuu iska dugsan.
Shacbigu golaha ha taageero waa gole wanaagsane, inta isku shaandhaynta dambe la gaadhayo
By. Axmed waraabe